Ahoana no hanamboarako ny sandan'ny fanovana hadisoana amin'ny fisoratana anarana? - Fahadisoana
Tena > Fahadisoana > Fahadisoana fanovana anarana fanalahidy - ahoana no fomba hipetrahana
Fahadisoana fanovana anarana fanalahidy - ahoana no fomba hipetrahana
Ahoana no hanamboarako ny sandan'ny fanovana hadisoana amin'ny fisoratana anarana?
Ahoana no ataokoamboary ny sandan'ny fanovana disoao amin'nylisitra?
MihazakazahaRegeditamin'ny maha Administrator. Mizaha mankany amin'ny Task Manager ary vonoy ny fizotry ny fampiharana programa iray izay anaovanao fanovana. ...
Fahazoan-dàlana hanova ho an'nylisitraFolder. Tsindrio Windows Key + R hanokatra Run. ...
Ampidiro amin'ny Safe Mode. Tsindrio Windows Key + R hanokatra mihazakazaka.
Salama ry mpampiasa, anio dia hasehoko anao ny fomba fanamboarana sy hamafana ny lakilen'ny fisoratana anarana foana. Voalohany indrindra dia tsy maintsy ataontsika izay lakilen'ny firaketana antsika ary izany dia fangatahana iray avy amin'ny mpampiasa ahy sy plural maro ary milaza izy fa afaka manamboatra lahatsoratra iray ianao hanampiana hisintona sy hametra ny lakilen'ny tapaka roa, kitiho ny mac toy izany ary misaotra anao nanontany , noho izany dia nampiasa lozisialy roa aho, izany hoe Trashregistry sy Registry Booster. Soregistry no tiako indrindra fa ity rindrambaiko ity dia nanampy ahy hanamarina ireo banga banga avy ao anatin'ny toerana misy ny lakile hahafahako manamarina hoe aiza no ao anatin'ny lisansa rindrambaiko ahafahako mitady ny lakileniko ho an'ny bokotra banga ao anaty fitoeram-pako tsy misy fidiovana antsoina hoe Gap antsoina hoe lavaka tena izy, Ka ny famenoana ny lakilem-banga ao amin'ny rezistrao sy ny fampitomboana ny rezistra anao dia misintona efijery maty hanamboarana ity mpanadio madio ity ao amin'ny rezistra ahy, ireto ireo rakitra fito ao amin'ny rezistra izay poakaty ary avy eo tsy misy ilana azy.
Noho izany dia lozisialy tena tsara ny mahita ny fanalahidin'ny bin recycle, manokatra booster itregister avy amin'ny uni blue soit aho, dia scanner ary mampiseho ny rejisitra misy ahy. pc mila manamboatra ny rejisitrao satria tsy ny scan fotsiny sy ny defrags ny tantaranao Defragmentation dia tena zava-dehibe aorian'ny fitilianao azy ka andao aloha hanombohana aho klicksscar dia hanomboka scanning miala tsiny noho ny olan'ny olana dimy hita 13 Milaza ny Activist Oal Sections ary mametraka Ohthat total Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18870745 '' tsy mahita an-tanana azy ary manao ahoana ny onerista eto amin'ny kabinetra H-key bla bla bla, ka mila fotoana ny fahitana azy sy hanoloana ary hamafana azy, koa raha sendra 'manamboatra' ianao, ind Ustry, indostria, na mamafa azy dia hanadio ho azy ny rezistra ataonao Efa vita izao Jereo ny fifandraisako, avo loatra ny fameperana toe-batana Avo izao ny fahasalamako ka misaotra an'ity iray ity. Ok, fa mandeha tsara sy haingana ny PC-ko. Ka inona izao ny defragmentation amin'ny resipeo ankehitriny hanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra ilainao handotoana ny rejisitrao toa ny tsy nataonao tao anaty kapila mafy kapanao ary ny zavatra rehetra toy izany tato ho ato dia tena zava-dehibe ny rafitra fa hampihena ny mety hisian'ny lavaka lee izany ary esorina ao bokotra fametahana unin ka mihabe kely ny habeanao ary hivoatra ny HP-nao ary hitombo ny fahombiazanao.
Misaotra anao nijery ary raha tadiavinao ity rohy fampiroboroboana manga ity amin'ny fampahalalana fanampiny na PM ho ahy ary manompoa zavatra toy izany ary homeko anao lakile serial maimaim-poana ianao noho izany misaotra anao mijery ary manantena aho fa mankafy azy ianao ny lahatsoratro ary misaotra anao ary nahalala fa nanoratra fangatahana tamiko ianao ary manantena ny hankafizanao ireo lahatsoratro sy veloma
Ahoana no ahazoako alalana hanova ny lakilen'ny firaketana?
Manokatra nylisitraEditor, kitiho ny Start> Run> Typeregedit.exe> ​​Tsindrio Enter. Ao amin'ny pane ankavia, tsindrio havanana amin'nyANDININ-izay ilainaalalanatsindrio avy eoalalana. Safidio ny vondrona na solonanarana misy nyalalanamila apetraka. Safidio ny boaty Avelao ilay boatyfidiranahaavon'ny vondrona na solonanarana.
Ahoana no hanamboaranao Tsy afaka mamorona valisoa Error manoratra amin'ny rejisitra?
1. Akatona ityfahadisoanaboaty fifampiresahana ary kitiho ankavanana eo amin'nylisitralakile izay tianao anaovana ny fanovana ary kitiho ny Permissions. 2. Ao amin'ny boaty fahazoan-dàlana alalana, eo ambanin'ny zoro fiarovana azy irery ihany, asongadino ny kaonty Administratera anao manokana na ny kaontin'ny mpampiasa anao ary avy eo dia zahao ilay boaty eo ambanin'ny Control Full - Avelao.17 feb 2021
Ahoana no fomba hanesorako ny lakilen'ny firaketana voaaro?
esoryFahazoan-dàlana avy aKey Registra
Raha vao manova nylakile fanoratana, hevitra tsara nyesoryny fahazoan-dàlana ho an'nyANDININ-. Tsindrio havanana amin'nyANDININ-safidio indray ny fahazoan-dàlana, ary safidio ny anaran'ny mpampiasa anao ao amin'ny lisitry ny lisitra misy ny anaran'ireo mpampiasa na eo amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra Fahazoandàlana Avy eo, kitihoesory.26 nov 2018
tmp cvr fisie
Salama, rahampitso tolakandro, izaho dia Danush avy amin'ny ekipa mpanohana an'i Sophos. Androany isika dia hijery ny fomba hanakanana ny fiarovana tamper amin'ny alàlan'ny Safe Mode amin'ny fitaovana Windows rehefa tsy mahomby ny teny miafina tamper na tsy afaka miditra amin'ny kaontinao afovoany ianao. hahazoana ilay teny miafina manelingelina.
Hanaraka ireo dingana ao amin'ny KB 124377 misy izahay ho rohy ao amin'ny haino aman-jery amin'ity lahatsoratra ity. Ireto no dingana harahinay: I voalohany hanefy ny solosaina amin'ny Safe Mode na amin'ny alàlan'ny MSconfig, fa afaka miditra amin'ny Safe Mode ianao amin'ny fomba rehetra tianao. Ny dingana manaraka dia ny fanakanana ireo serivisy sasantsasany, dia ny Agent Sophos MSC sy ny serivisy Sophos Antivirus.
Ary ny dingana farany dia ny fanovana ny lakilen'ny fisoratana anarana ary tokony heverina ny fiarovana tamper. Andao hanombohana, hiditra amin'ny Safe Mode dia azonao atao ny mampiasa ny fomba fakan-tsarimihetsika ho an'ny fitaovanao manokana na azonao atao ny mampiasa msconfig hanamboarana ireo safidy boot amin'ny rafitra. Raha hampiasa MSconfig, sokafy ny akorany amin'ny alàlan'ny fanoratana ny fihazakazahana ao amin'ny bara fikarohana, avy eo dia kitiho ny msconfig ary kitiho ny Enter amin'ny keyboard-nao.
Vantany vao misokatra izy, atombohy ny fizotran'ny boot, araho maso fa baoty soa aman-tsara izy io, ary rehefa tafiditra ao anaty solosaina ianao dia alao antoka fa afaka mandeha koa ny tamba-jotra mba hahafahanao mitazona ny fidirana amin'ny tambajotra amin'ny solosaina. Afaka manao fangatahana isika, ok ary manomboka indray. Vantany vao ao amin'ny Safe Mode isika, raha manao izany dia ajanoninay ny serivisy, sokafy indray ilay akorandriaka ary miditra services.msc.
Hanokatra ny console ny serivisy izany ary hikaroka ny serivisy Sophos Antivirus, tsindrio havanana ny Properties ary hanova ny Startup Type ho sembana, tsindrio Ampiharo ary OK. Avy eo dia tadiavo ny maso ivoho SophosMCS, tsindrio havanana amin'ny fananana, avelao ho simba ny ora fanombohana, mampihatra ary ok. Vantany vao vita izany, andao hiroso amin'ny dingana manaraka, izay manova ny soatoavin'ny firaketana.
Azonao atao koa ny manokatra ny Start Shell indray avy eo amin'ny bara fikarohana, manorata regedit, ary alao antoka fa hametaka ny fisoratana anarana alohan'ny hanovana ny lakilen'ny firaketana. Raha manao an'izany aho dia mankany amin'ny File> Export ary afaka mampiasa izay anaran'ny rakitra tianao ianao, dia nampiasa backup.regalready.
Efa nataoko ny nomaniny ho solon'izay fisoratana anarana ka tsy hataoko intsony. Tsara kokoa raha manamboatra backup amin'ny alàlan'ny fanalahidy rehetra ianao ary rehefa vita izany dia afaka miditra ao amin'ny solosaina eo an-toerana HKEY> Rafitra> Fanaraha-maso ankehitriny> Serivisy> lakilen'ny fisoratana anarana Sophos MCS Agent. Hamarino tsara fa ny sandan'ny fanombohana dia napetraka amin'ny 4 ary ny lakilen'ny fisoratana anarana hafa dia ny manamarina ny fiarovana Sophosendpoint> Tamper Protection> config.
Raha hitanao fa tokony hapetraka amin'ny 0 ny SAVenabled ary tokony hapetraka amin'ny solosaina 0 eo an-toerana ihany koa ny SEDenabled ary mandehana amin'ny lozisialy> WOW6432> node> Sophos ary tadiavo ny serivisy SAV, mandehana miaro ny fiarovana ary alao antoka fa voapetraka ny sandan'ny azo atao. hatramin'ny 0. Raha vantany vao vita izany, raha nampiasa MS config handefasana ny solosaina amin'ny Safe Mode ianao dia avereno amin'ny fanombohana ara-dalàna ny fanovana ary avereno. Mba hanaovana izany dia sokafy indray ny akorandriaka.
Soraty ny msconfig, mandehana mankany amin'ny boot, alao ny maody azo antoka, ok ary avereno. Ny fiarovana tamper dia tokony hesorina amin'ny solosainao. Misaotra nijery, raha manana fanontaniana hafa ianao dia zahao ny KB 124377, azo alaina amin'ny bio na vaovao, ary aza manontany foana ny vondrom-piarahamonina
Ahoana ny fomba hanovana anarana ny show.error raha manome anarana ny lakile?
'Tsy afaka manome anarana anarana fampisehoana ny tonian-dahatsoratra. Hadisoana raha manome anarana ny lakile. ' Mampiasa fanontana an-trano Windows XP aho ary manana tombony manokana amin'ny fitantanana. Akatony ny propgramme mety manidy ny lakile. Mandehana any amin'ny fanalahidy ao amin'ny tonian-dahatsoratry ny rezistra, tsindrio havanana ary tsindrio permisons.
marika fanamarihana ivelany
Misy fomba ve hanovana anarana ny lakilen'ny firaketana?
Tsy afaka mamerina ny anarana hoe Key ny Editor Registra. Fahadisoana raha miova anarana ny lakile. Miezaka ny manome anarana ny solosaina HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control SafeBoot lakilen'ny fisoratana anarana ambany indrindra aho fa mahazo lesoka etsy ambany: 'Tsy afaka manome anarana hoe Key ny Editor Registra. Hadisoana raha manome anarana ny lakile. '
Ahoana ny fomba hanovana anarana ny lakile voalohany amin'ny dinamika?
Ny Dynamics AX dia mamela anao hanome anarana ny lakilen'ny latabatra voalohany. Ohatra iray ity, amin'ny fampiasana ny LedgerTable. Tsindrio havanana & gt; Fampahalalana momba ny firaketana Tsindrio ny bokotra rename ary apetraho ny sanda tadiavinao. AX dia manonona ny lakile voalohany sy ny fifandraisana rehetra. Ity no làlana madio. AX anatiny dia miantso ny fomba renamePrimaryKey (…).
Inona no hatao raha tsy manome anarana anarana fidirana ao amin'ny REGEDIT ianao?
Mampiasa fanontana an-trano Windows XP aho ary manana tombony manokana amin'ny fitantanana. Akatony ny propgramme mety manidy ny lakile. Mandehana any amin'ny fanalahidy ao amin'ny tonian-dahatsoratry ny rezistra, tsindrio havanana ary tsindrio permisons. Jereo ny tabilao mandroso. Mitadiava fahazoan-dàlana DENY. Mialoha lalana ny alalana ALLOW.